ဂျပန်မှာအစွမ်းဆုံး အငြိုးကြီးသရဲ ၃ ကောင်ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဖြစ်မှန်
ကြာ 20 Jan 2022, 15:17 ညနေ
လိင်ဆန္ဒပြင်းပြလွန်းတဲ့ ဧကရာဇ်တစ်ပါး? ထိုဧကရာဇ်၏နန်းကျခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲ
ဂျပန်ရဲ့ နာနာဘာဝဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ အထိရှိ !!!!
ဘယ်ဘက်ကိုအားသန်တဲ့ နိုင်ငံ၊ ဂျပန် !!!!!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတာ စစ်တပ်လား? စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
ဟိုတယ်မှာတည်းခိုရင်း ရထားနှင့်လေယာဉ်မောင်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေး (သင်ဟာရထားချစ်သူလား? လေယာဉ်ချစ်သူလား?)
တစ်ရှူးလိပ်ပေါ်ရုပ်ပုံများရေးဆွဲပြီး ကလေးများအတွက် လိင်ပညာပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်
တရုတ်ရာသီခွင် “ နွား” နှစ်အတွင်း ဂျပန်တွင်မွေးဖွားခဲ့သူပေါင်း ၁၀.၆၆ သန်းခန့်ရှိ
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ် ဆာမူရိုင်းတွေ၊ ရှောဂွန်းတွေရဲ့ တစ်နေ့တာနေထိုင်မှု၊ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုမိုတည်တည်တံ့တံ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရှောဂွန်းများ
စစ်သင်္ဘောဒီဇိုင်းများရဲ့ နတ်ဘုရားဖြစ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့အရှုံး။ ဂျပန်ရှုံးရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း။
တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ဓားပြဘုရင် Murakami Suigun
အသက် ၅ နှစ်မှာကတည်းက ခွေးကို သတ်ရပြီး၊ ၁၅ နှစ်မှာ လူကို သတ်ရတဲ့ ဆာမူရိုင်းများ